I-sea urchin yentlanzi | Ngeentlanzi
Olona phawu lubalulekileyo kwezi ntlanzi lubizwa I-urchin yolwandle okanye intlanzi ye-porcupine kukuba zithwala ameva amaninzi ukuzikhusela. Ke ngoko zifana nentlanzi. Imiqolo ethi gqi xa iintlanzi zisemngciphekweni.
Ukuba lilungu losapho lakwaDiodontidae, ziyafumaneka zikhona kuzo zonke iilwandle zetropiki kwaye ezinye iintlobo nkqu nakwiilwandle ezipholileyo. Mikhulu kuneentlanzi ezikhukhulayo. Kuba ngaphakathi kweentlobo ezahlukeneyo ezifikelela kwi-90 cm ubude.
Iintlanzi zeHedgehog njengentlanzi ye-puffer ayinayo imiphetho ye-pelvic ke kunzima ngakumbi kubo ukulawula iintshukumo zabo. Kwaye njengale, xa zisongelwa kwaye zihlaselwa, ziphindaphindwe kathathu ngobukhulu. Bayayenza ngokufaka amanzi, ngeli xesha abanakudada okanye kuyacotha. Iintsiba zisongelwe ukuya kuthi ga ngelo bristle ngokugrogrisayo.
El Ukuziphatha oku-ndlongondlongo kwii-aquariums kunzima kakhulu ukukwenza. Ngenxa yokuba i-urchin yolwandle iya kuba semngciphekweni wesilwanyana sangempela. Nangona kunjalo, kufanele kuthathelwe ingqalelo xa ukhetha iintlanzi ezinokuhlala kunye nazo ngaphandle kweengxaki. Ukusukela ukuba iintsiba ziyanda, ikhupha into enetyhefu enokuthi ibe semngciphekweni wendalo yaselwandle.
Thembele kwi Izinyo elibaluleke kakhulu lomlomo xa usondla. Oku kuyenza lula ukuba yaphule iigobolondo zezilwanyana ezingenamqolo apho izondla khona. Ngesi sizathu ziintlobo ezingahambelaniyo ngokupheleleyo nalo naluphi na uhlobo lwe-invertebrate yeselfowuni yendalo yokuhombisa. Kungoko umhombiso we-aquarium kufuneka wenziwe ngelitye eliphilayo okanye ngee-invertebrate ezingezizo.
De uhlalutyo lomntu ulungelelanisa kakuhle nokuthinjwa Kwaye babonisa uhlobo oluthile loxabiso ngomnini wabo. Nangona kunjalo, banokubonisa izilumkiso kunye nezinye iintlobo ezifanayo, umzekelo intlanzi ekhukhumezayo okanye intlanzi yebhokisi. Ayizukunyamezelana nobume bayo kunye nezinye iintlanzi ze-urchin.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Iintlanzi zolwandle